Ikhwalithi yethu - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Iziqukathi ezihlanzekile – inhlanganisela ephelele yenani nokusebenza
Ukukhiqizwa kwemikhiqizo yokwengeza eyengezwe ngenani eliphezulu kanye nokudla neziphuzo okuphephile kanye neziphuzo kudinga iziqukathi zekhwalithi ephezulu ezihlanzekile. Ukhiye wokukhiqiza iziqukathi zekhwalithi ephezulu ukukhiqiza okuphezulu, izinto ezisezingeni eliphakeme, ukucubungula okuphezulu, ukulawulwa kwekhwalithi eqondile nokuklama okukhuthazayo: ukusebenza kwe-aseptic, idizayini yokuphela efile, izingxenye ezihlanganisiwe zeCIP / SIP zekhwalithi ephezulu, uhlelo oluhlanzekile nolulula ukusebenza lokuqapha.
Isiqukathi esihlanzekile kungaba yunithi ezimele yodwa noma iyunithi ezenzakalelayo yenqubo, efakwe njengemodyuli esebenzayo esizeni sekhasimende, kufaka phakathi: ukuxokozela, i-homogenization, ukusabalalisa, ukukala, neyunithi yokulawula, ukuxhumana kwe-valve namapayipi. Imishini yeQiangzhong ingahlinzeka ngazo zonke izinhlobo zeziqukathi ezihlanzekile ezihlangabezana nezidingo zemithi yemithi, ukudla nesiphuzo, nezinqubo zamakhemikhali ezinhle. Sineziqu zokukhiqiza ingcindezi ye-D1 / D2, idizayini yobungcweti neqembu lokukhiqiza kanye nenqubo yokukhiqiza evuthiwe, engasiza amakhasimende ukuthi akhethe imishini yenqubo efanele, aqinisekise ngokugcwele ukuphepha nokwethembeka kwemikhiqizo yakho, nokuqinisekisa ukusetshenziswa kahle.
Welding and Weld Treatment – ​​Inqubo Yokwenza Okuhle
Ikhwalithi yethangi inqunywa ngamasu wokucubungula we-welding ne-weld asetshenziswa enqubeni yokukhiqiza. Amandla e-Weld nekhwalithi yangemva kokwelashwa iqinisekisa impilo yethangi nokusebenza kahle kokusebenza.
Imishini yaseQiangzhong isebenzisa insimbi engagqwali esezingeni eliphakeme ukwenza ithangi. Lezi zinto zensimbi zinezidingo ezinzima kakhulu zamasu wokucubungula ama-welding kanye ne-weld ukuqinisekisa ukuthi ithangi liqinile futhi linempilo ende yokusebenza nokuzinza. Imishini yeQiangzhong ibhekane nama-welders anekhwalithi eqinile kakhulu yokushisela nokuphindeka okuphezulu. Inqubo yokushisela ihlolwe kuyo yonke inqubo kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva bokushisela obuzenzakalelayo emakethe.
Ubuchwepheshe bamuva bokushisela ngokuzenzakalela buqapha inqubo yokushisela kuyo yonke indawo.
Ukuqinisekisa ikhwalithi ye-Welding
Welding okuzenzakalelayo, MIG / TIG Welding
ukushisa kwegumbi lokuzenzekelayo nokulawulwa komswakama, ukulawula uthuli
isampula impahla, ukujiya nokulawula okokushisela kwamanje
ubumsulwa obuphakeme bokuvikela igesi ye-argon
okuzenzakalelayo Welding irekhodi
Ukulawulwa kwekhwalithi nokuhlolwa
cubungula wonke amathangi Ukuhlolwa kwekhwalithi eqinile kufanele kwenziwe. Lokhu kuhlolwa kuyi-
ingxenye ebalulekile yenqubo ye-FAT nemibhalo efanele izofakwa kufayela le-FAT futhi ekugcineni ithunyelwe kumakhasimende. Izinto zokuhlola ze-FAT ikhasimende elingazicela zifaka:
• Ukuhlolwa kwempahla
• Ubukhulu besimo sokuhlola nokulinganisa
• Ukushisa, ukuhlolwa kokupholisa
• Ukuhlolwa kukaRiboflavin
• Ukuhlolwa kukagesi okufana nokuhlola okushukumisayo, ukuhlolwa kokudlidliza, ukuhlolwa komsindo, njll.